चिनियाँ बच्चा पछाडि प्वाल परेको पाइन्ट किन लगाउँछन् ? यस्तो छ कारण - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
यदि तपाईले बालबालिकाले बाटो, पार्क, सपिङ्ग मल जस्ता सार्वजनिक स्थानका मा खुलेआम उठेर दिसा पिसाप गरिरहेको देख्नु भयो भने के सोच्नु हुन्छ ? तर यो चीनमा भने सामान्य कुरा हो ।
यो विशेष प्रकारको पाइन्ट हो, जसको पछाडिपट्टीको भागमा ठूलो प्वाल पारिएको हुन्छ । पहिलेको तुलनामा यस्तो लुगाको प्रयोग आजकल कम हुँदै गए पनि अझै यो परम्परा सकिएको छैन ।
चीनमा आउने विदेशी नागरिकहरु यो पराम्परालाई राम्रो मान्दैनन् । उनको भनाइमा यो लुगा लगाउनले बालबालिकामा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना हुन्छ ।
देख्नमा यो पोशाक नराम्रो लागे पनि केही फाइदा पनि छन् । चिनियाँहरु यो मान्छन् कि यस्तो पोशाक लगाउनाले बच्चाले शौचालय प्रयोगबारे चाँडै जानकारी पाउँछन् ।
बच्चालाई डाइपर लगाइदिँदा शौचालय जाने बानी ढिलो गरी मात्र बस्ने उनीहरुको भनाइ छ । बच्चाहरु गलत ठाउँमा शौच गर्न बसे अभिभावकहरुले रोक्ने गर्छन् । चीनमा बच्चा तीनदेखि चार महिनाको हुने वित्तिकैदेखि शौचालयमा जान सिकाउने गरिन्छ ।
जबकी, पश्चिमी देशहरुमा एक वा डेढ वर्षको उमेरदेखि मात्रै शौचालयमा जान सिकाउने गरिन्छ । चिनियाँ बच्चाहरुको यो परम्पराले मानिसहरुको ध्यान खिचिरहेको छ । र, इन्टरनेटमा पनि बहस भइरहेको छ ।
यदि चिनियाँ बजारमा बालबालिकाको कपडा खोज्ने हो भने पाइन्टमा प्वाल परेको बाहेकका कपडा भेट्टाउन मुस्किलै पर्छ । जसले पनि ‘कई डांग कू’ को लोकप्रियतालाई पुष्टि गर्छ ।
चीनमा ‘कई डांग कू’ को प्रयोगलाई लिएर समय समयमा विवाद समेत हुने गरेको छ । हरेक पटक यसको प्रयोग वातावरणको लागि फाइदाजनक छ कि छैन भन्ने बारेमा बहस हुने गरेको छ ।
कतिपयको मान्छन् कि यसको प्रयोगले कयौं टन फोहोर उत्पादन हुने खतरालाई कम गरेको छ । केही चिनियाँ डाक्टरहरले भने यो मान्न थालेका छन् कि नष्ट गर्न मिल्ने डाइपरको प्रयोग गर्नु उत्तम हो । र, डाइपरलाई बेलाबेला परिवर्तन गर्नु पर्छ नत्र रोगको सङ्क्रमण हुने खतरा हुन सक्छ ।